Brandt na-emepụta ụlọ ike na-ere ngwá ọrụ mba ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Brandt na-emepụta ụlọ ike na-ere ngwá ọrụ mba ụwa
Brandt Tractor Ltd., onye enyemaka nke Brandt Group of Companies, nwere obi ụtọ ịkpọsa na ọ nwetala Cervus Equipment Corp., na-eso nkwado 97.66% maka nkwekọrịta ahụ na ntuli aka October 12, 2021 nke ndị nwe Cervus mere. Azụmahịa a na-ahụ mgbanwe Cervus nke a na-ere n'ihu ọha gaa na 100% nwe onwe na nkwekọrịta ego niile.
Azụmahịa ala ama ama na-emepụta netwọk ndị na-ere ngwa ngwa Canada, na-agbakwunye ọrụ ugbo 64, ụgbọ njem, na ebe akụrụngwa ejizi na Brandt dị ugbu a John Deere Construction & Forestrships n'ofe Canada. Mgbe ejikọtara ya nke ọma, ọ ga-enye ndị ahịa Cervus ohere ịnweta nnukwu akụkụ obodo Brandt na akụrụngwa nkwado teknụzụ.
Nzụta ahụ na-egosipụtakwa ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ dị ka onye isi ụlọ ọrụ Canada na-ejide onwe ya na onye na-ere ahịa John Deere kasị ukwuu n'ụwa.
"Mgbakwunye netwọk alaka Cervus bụ nnukwu mmeri nye ndị ahịa n'ahịa niile metụtara," ka onye nwe Brandt na CEO, Shaun Semple na-ekwu. "Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-enye na anyị dị njikere iweghachite aka anyị wee nweta iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa anyị ọhụrụ site na ngwakọta ngwaahịa na ọrụ adịchaghị mma yana ahụmịhe nkwado ndị ahịa na-agbanwe agbanwe, dị elu."
Nkwekọrịta ahụ na-enye Brandt ntinye ahịa na-enweghị atụ, gbasaa akara ukwu ala ha ma mee ka ụlọ ọrụ ahụ gbakwunye, na ahịa ndị a họọrọ, ngwá ọrụ ugbo John Deere; Ngwá ọrụ ụgbọ njem Peterbilt; na Clark, Sellick, JLG, Baumann na ihe ndị ọzọ eji eji ihe eji eme ihe na mgbakwunye na ndepụta ngwaahịa na ọrụ ha na-adọrọ adọrọ.
Site na ịnweta ebe Cervus dị na Canada, Australia na New Zealand, Brandt nwere ugbu a ma na-arụ ọrụ 120 ngwá ọrụ ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ 50+ ọzọ ma na-ewe ihe karịrị mmadụ 5100.
Azụmahịa a ga-enwe mmetụta dị ukwuu n'ofe ụlọ ọrụ ahụ ka ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụta atụmatụ iwebata ngwa ahịa akụkụ agbasawanye, ikike ngalaba ọrụ na ogologo oge ọrụ na ụlọ ahịa Cervus mbụ. Ka ejikọtara ọrụ, a na-atụ anya na ndị ọrụ na ebe ndị a ga-abawanye ruo 40% na-eji nnukwu ihe owuwu ọhụrụ arụ ọrụ n'ofe netwọkụ niile.
"Ndị ọrụ Cervus, ndị ahịa na ndị obodo ha ga-erite uru site na nzụta a site na netwọk nkwado siri ike ma dị iche iche," Semple kwubiri. "Brandt kwenyesiri ike na itinye ego na-aga n'ihu na akụrụngwa azụmahịa na nkwalite obodo; enwere ohere dị ukwuu maka onye ọ bụla na nkwekọrịta a. "
Azụmahịa ahụ mechiri n'ihu ọha na Ọktoba 22, 2021.